कहिले बन्ला स्मार्ट सिटी ? - Worldnews.com
कहिले बन्ला स्मार्ट सिटी ?
र्ट सिटीको बारेमा अहिले निकै बहस र चर्चा चुलिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले स्मार्ट सिटी बनाउने भाषणलाई बढी नै प्राथमिकता दिए। महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म अहिले स्मार्ट सिटी निर्माणको विषयले बहस जन्माएको छ।
निर्वाचनको क्रममा स्मार्ट सिटी निर्माण
सन्तोष खनाल स्थानियतह निर्वाचनदेखि शुरुभएको स्मार्ट सिटीको कुरा प्रदेश र संघको निर्वाचनसँगै विस्तारै हराउँदै छ। सबैजसो दलले बनाएको चुनावी नारा नारामै सीमित हुन लागेको जस्तो...
मणिराम गेलाल महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सुरक्षित र व्यवस्थित शहर आजको आवश्यकता हो। व्यवस्थित शहरीकरण नै समृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो। अव्यस्थित विकास...
यस्तो हुनुपर्छ स्मार्ट सिटी
विकसित देशमा हुने स्मार्ट सिटी भनेको सुविधा सम्पन्न र मोभिलिटी पनि सुपर फास्ट हुन्छ। तर हामी कहाँ निर्माण हुने स्मार्ट सिटी भन्नाले आधारभूत पुनर्संरचनासहितको भौतिक...
News of Nepal 2018-01-24
सुरेश तामाङ स्थानीय तहलगायतका चुनावताका सबै पार्टीको घोषणापत्रमा र प्रत्येक पटकको भाषणमा प्रत्येक नेताका स्मार्ट सिटी बनाउने मीठा भाषण सुनिए। स्मार्ट सिटी हुन आवश्यक...
News of Nepal 2018-06-25
पोखरा लेखनाथ महानगरापालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो महानगरपालिका हो। ग्रामीण भेगलाई समेत समेटेर ३३ वटा वडामा विभाजित यो महानगरपालिको क्षेत्रफल ४६४.३२ वर्ग किमि छ। ४...
काठमाडौँ । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक शहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको भए पनि प्रगतिका हिसाबले ती परियोजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।...
News of Nepal 2018-06-12
काठमाडौँ । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक शहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको भए पनि प्रगतिका हिसाबले ती परियोजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷७८ देखि मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरको छनोट गरी नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको थियो । तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका दुई–दुईवटा बस्ती छनोट गरी काम शुरु भएको थियो ।...
‘नगरपालिकाको प्राथमिकतामा योजना छनोट गर्छौं’
सुविधा सम्पन्न शहरको अपेक्षा आज हरेक नागरिकले गरिरहेका छन्। शहरलाई सुशासन कायम गराउनका लागि नगरपालिकाहरूले क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न नहुँदा नगरपालिकाले जनताको चाहनाअनुसारको पूर्वाधार विकासको काम गर्न कठिन हुन्छ। नगरपालिकाहरूले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। नगरपालिकाभित्र सडक, ढल, खानेपानी,...
भूकम्पपछि प्रभावकारी बन्दै राष्ट्रिय भवन संहिता
मधुसूदन रायमाझी प्राकृतिक विपत्ति कहाँ र कतिखेर आउँछ भन्न सकिँदैन। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। २ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्यो। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन। तर, मानव निर्मित भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सके केही मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हरेक ८० देखि सय वर्षको...
सरकारले केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भएको छ। यो खबर मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्। सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन एकीकृतरूपमा एउटै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एकीकृत भवन निर्माणका लागि स्थान...
यमलाल भूसाल प्रवक्ता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विनासकारी भुकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि अधिकांश भूकम्पपीडित टहरामै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसैबीचमा सरकारले पीडितलाई थप एकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी आवासीय भवनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन। पछिल्लो समय...